दाजु विदेशमा, घरमा सबै सुतेपछि भाउजु आउनुहुन्थ्यो, बच्चा होला भन्ने थाहा थिएन ! – AB Sansar
October 4, 2020 adminLeaveaComment on दाजु विदेशमा, घरमा सबै सुतेपछि भाउजु आउनुहुन्थ्यो, बच्चा होला भन्ने थाहा थिएन !
दाजु विदेशमा, घरमा सबै सुतेपछि भाउजु आउनुहुन्थ्यो, बच्चा होला भन्ने थाहा थिएन ! । केही घटनाले भाउजु आमा समान हुन्’ भन्ने युक्तिलाई केबल उखान मात्रमा सिमित गरिदिन्छ । र पत्याउनै नसकिने घटना हुन्छन् । कैलालीका एक किशोरको बयानले सबैलाई अचम्बित पारेको छ । उनको बयानले माथी उद्धारण गरिएका शब्दलाई मिथ्या सावित गरेको छ । *** भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
आमालाई जस्तो सम्मान गर्नुपर्ने आफ्नै भाउजु देवरबाट गर्भवती भइन् । त्योपनि दाजु विदेश गएका बेला । घटनाले त्यति बेला पुष्टि पायो जतिबेला भाउजुको पेटमा हुर्किदै गएको बच्चा बढेर पेटको आकारमा बृद्धि भयो । प्राप्त जानकारी अनुशार कैलालीको लम्कीमा एक १८ वर्षीय देवरले भाउजुलाई गर्भवती बनाएका हुन्।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
विषय प्रहरीसम्म पुगेको छ । प्रहरीले सहमतिमा नै सम्बन्ध कायम गरेको दुवैले स्वीकार गरेपछि र उजुर बाजुर नगर्ने एकसाथ बस्ने सहमति भएपछि मिलापत्र बनाउँने तयारी गरेको छ । तर किशोरको उमेर सानो भएकाले निगरानी राख्ने भएको छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
स’सुरा ब ला त्का र ग र्थे, पा नी मा ग्दा मु खमा पि साब फे रिदि ए’ एक चेलीको दुनियाँ रू’वाउने दर्दनाक पि’डा’
कहिँ गाडी नपायर टिप्परमा जाने नि’धो गरे बाटोमा राती बच्चाकै अ’गाडी सु’रुवाल खो’लेर पा पिहरुले जे-जे गरे…
दाङमा जिप दुर्घटना हुँदा चालकको मृ’त्यु, २ जना घाइते
May 5, 2021 Ab-संसार
May 13, 2021 santosh
कोरोनाको “प्रवाह नगरी साझपख ललितपुरको पाटन दरवार आसपास क्षेत्र घुम्न ,निस्किएका सर्वसाधरण हेर्नुहोस् ,यि दृश्यहरु ॥